माधव नेपालप्रति ओलीको टिप्पणी : लाजसरम पचेको मान्छे – News Book Online
माधव नेपालप्रति ओलीको टिप्पणी : लाजसरम पचेको मान्छे
असार १४, २०७८ १४:५२ प्रकाशित
१४ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई लाज सरम पचेको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रचण्डपथलाई अँगालेको भनेर आरोपसमेत लगाए ।७० औं मदन भण्डारी जन्मजयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले माधव नेपालप्रति सो टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘माधव नेपाल भन्ने एक जना कांग्रेसको पछाडि कुद्ने मान्छे छन्,’ ओलीले भने, नेपालको राजनीतिमा सबैले चिन्छन् प्राय । किनभने असाध्यै चर्चा भइराख्या छ । यतिसम्म पनि मान्छे पतन हुने रहेछ । कम्युनिष्टको सरकार ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउने, अर्कोतिर लागिसक्ने अनि नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता हुँ भनेर भन्ने । यस्तो लाज सरम पचेको मान्छेको चर्चा सकारात्मक हिसाबले मात्र होइन नकारात्मक हिसाबले पनि चर्चा त हुन्छ ।’ यो पनि पढ्नुहोस:प्रचण्डको काम नै देश बर्बाद बनाउने हो : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई देश बर्बा बनाउने पात्रको रुपमा चित्रित गरेका छन् । आज (सोमबार) बालुवाटारमा आयोजित मदन भण्डारीको ७०औं जन्मजयन्तीको अवसरमा बोल्दै उनल प्रचण्डका काम भनेको नै देश बर्बाद बनाउने भएको बताए ।
उनले भने,‘प्रचण्डको काम देश बर्बाद बनाउने हो । त्यस्ता मान्छेलाई गुरु थापेर केही नेता हिँडेका छन् । होईन, उनीहरुलाई प्रचण्डपथमा हिँड्नु किन परेको होला ? अचम्म लाग्छ । प्रचण्डलाई पनि सही लोकतान्त्रिक मार्गमा ल्याउन जरुरी छ । सिके राउत, विप्लवलाई सही मार्गमा ल्याएकै हो ।’त्यस्तै, उनले प्रचण्डलाई छेपारोजस्तो रंग फेर्ने नेताको संज्ञा पनि दिए । उनले भने-“प्रचण्डले हालै राष्ट्रपतिभन्दा राजा नै राम्रो भनेको र मानिसहरु छक्क परेका छन्, तर किन छक्क मान्ने ? छोपारोले रंग एकछिनमा फेर्छ त ?